I-inshorensi abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Japan kuba Wonke Isixeko
Nagahama, Mizuno Inoue ifumaneka Tokyo, Ejapan kwaye ibonelela iinkonzo non-Isijapanese abantu kwaye amakhulu ngokunjalo Isijapanese abantu kwaye amakhulu. Senzo kwiindawo ziquka corporate umthetho, mergers kwaye acquisitions, nephepha kwaye i-arhente zamazwe ngamazwe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Baker McKenzie (Gaikokuho Edibeneyo Yeshishini) sele ezinikezelwe exceptional isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethu zokusebenza kwi-Japan kwaye internationally kuba ezine decades, kwaye enye oldest, ukususela ivula yayo doors njengoko i-enxulumene-ofisi Baker McKenzie ngowe.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ngu inkokeli phakathi wamazwe ngamazwe firms, ngokubonelela ishishini umthetho ingcebiso ephezulu umgangatho kulo lonke Yurophu, Kumbindi Mpuma, e-Asia kunye NATHI. Kunye phezu, amakhulu amahlanu abaqondisi-mthetho kwamashumi amabini anesixhenxe iqhosha ishishini centers jikelele ehlabathini, sinike elizeleyo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Ashurst yindlela ephambili wamazwe ngamazwe ifemi advising corporates, — mali amaziko kunye noorhulumente. Zethu ezingundoqo amashishini basemazweni corporate, iimali, imbambano isisombululo, uphuhliso kunye financing ka-yexabiso kwi-amandla, zokusebenza kunye neziseko macandelo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa E Kilpatrick Townsend Stockton LLP, bethu attorneys ingaba ngokupheleleyo owenza impumelelo ifemi ke abathengi. Thina khulula iziphumo-oriented ingcebiso kuba amakhulu kwaphela stages ka-ukukhula emaphandleni, ukususela ngumngeni iimfuno-mali eyenziweyo kwaye securities ukuba omkhosi. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Mhlophe Kunjalo, waseka Enew York ngowe, sele abaqondisi-mthetho e-United States, isilatini America, i-Europe, Kumbindi Mpuma, e-Afrika kwaye e-Asia. Zethu abaxhasi zi yoluntu kwaye ngasese igcine abarhwebayo amashishini kunye mali amaziko, ngokunjalo noorhulumente imeko-owned karhulumente, obandakanyekayo. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Upawulos, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP yi ifemi ngaphezu ezintandathu anamashumi abaqondisi-mthetho, kunye diverse backgrounds, personalities, izimvo kwaye umdla, abo intsebenziswano kunye abaxhasi ukubanceda athimba zabo ezininzi kakhulu isemthethweni kwaye imingeni ushishino njongo. Wethu ixesha elide-emi abaxhasi ziquka. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Foley Lardner LLP yi highly ithathwe, wesizwe umthetho ifemi ekuboneleleni umxhasi-focused, ishishini-ethile, iinkonzo ukuba iziphumo high-ixabiso isemthethweni ingcebiso kuba abaxhasi bethu. Zethu senzo kwiindawo encompass ngokupheleleyo umqolo we corporate isemthethweni iinkonzo, kuquka corporate ulawulo ukuthotyelwa kwemithetho. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Clifford Ithuba sesinye ihlabathi ke ezikhokelela umthetho firms, kunye amabini anesithoba ofisi kwamashumi amabini amazwe kwaye abanye, amabini anamashumi isemthethweni advisers. Enye lwahlulelwano, ifemi sele unrivalled umlinganiselo kwaye ubunzulu isemthethweni zokusebenza kwilizwe liphela, zine — iqhosha kwiimarike Baseamerika, e-Asia, i-Europe kunye Kumbindi Mpuma. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Herbert Smith Freehills sesinye ihlabathi ke ezikhokelela elinolwazi iinkonzo amashishini, ukuzisa kunye eyona abantu kuwo zethu amabini anesithandathu ii-ofisi, bahlangana bonke yakho isemthethweni iinkonzo neemfuno ngqukuva. Sinako ukunceda ukuba baqonde amathuba xa yokulawula umngcipheko. Abaqondisi-mthetho kwi-Latham ke Tokyo-ofisi ukuqonda iimfuno kwaye imingeni ukuba abaxhasi ubuso. Ngapha umdibaniso ifemi ke intimate ulwazi Isijapanese imarike yayo, baninzi indawo khona ezweni, ifemi ngu ngokugqibeleleyo wabeka ukukhonza umnqamlezo-umda ishishini iimfuno abaxhasi. DLA Piper waba lelinye oyena isemthethweni inkonzo bamatyala ehlabathini kwi- nge-ukudibana ka-unprecedented ekhaya kwi-isemthethweni kwicandelo lezolimo. Xa inkulu kuzo umlinganiselo, ukudibana isicwangciso-buchule waba elula — ukwenza i-ngamazwe isemthethweni senzo capable ka-ethabatha nokukhathalelwa ibaluleke kakhulu isemthethweni iimfuno zabantu. Morgan Lewis ke Tokyo-ofisi inikezela zethu abaxhasi sophisticated, esebenzayo ngokusemthethweni ingcebiso kwi-Japan. Zethu-ofisi combines yehlabathi zokusebenza ka-Morgan Lewis kunye izakhono nolwazi zethu Isijapanese edibeneyo nokulinga iqabane lakho, TMI Associates, ngokusebenzisa zethu Morgan Lewis-TMI edibeneyo nokulinga.
Ukwakha ukusuka yayo kweelwimi-ifumana imali kwaye securitization iindlela ezilungileyo, Atsumi Sakai siqulunqe ubunzulu iinkalo zobuchule ukuba ivakalisa kuwo onke ka-imihlaba ishishini kwaye iimali umthetho. Ifemi sele lunxulumano ukugqwesha kuba yayo innovative izakhono kwi-ezemali, ingakumbi kuba umsebenzi wethu kule projekthi. Owu’Melveny Myers LLP ngu lunxulumano njengoko omnye ezikhokelela wamazwe ngamazwe firms kwi-China, kunye senzo covering a ngokubanzi umqolo we imizi-mveliso, abaxhasi, kwaye imicimbi. Siza kunikela elinye yelenqe Isitshayina wobulali nokwazi-njani kwaye wamazwe ngamazwe ifemi ukugqwesha.
Thina ikratshi ngokwethu kwi-fact
Shearman Isilivere LLP, yehlabathi umthetho ifemi, wenziwe advising abaninzi ehlabathini ke ezikhokelela amakhulu kwaye mali amaziko, noorhulumente governmental organizations kuba ngaphezu eminyaka. Nabaqondisi-mthetho zinikelwe ekuboneleleni isemthethweni ingcebiso oko kukuthi insightful kwaye exabisekileyo kubathengi bethu. Morrison Foerster ufumana i-global ifemi kunye phezu, abaqondisi-mthetho kunye elinesithandathu ofisi jikelele ehlabathini. Zethu attorneys share imigangatho ephezulu, ukuzinikela ukugqwesha, passion kuba ekuncedeni zabo abaxhasi waphumelela. Zethu Corporate Senzo limele abanye ezona anako konke iinkampani ehlabathini. Dillon Eustace sesinye Ireland ke ezikhokelela umthetho firms lwesiqulatho apho kugxilwa kwi-mali iinkonzo, banking kwaye imali yentengiso, corporate-M-A, litigation kwaye imbambano isisombululo, real estate kwaye taxation. Sidley Austin LLP ufumana i-global umthetho ifemi, kunye nama- abaqondisi-mthetho kwi-elinesixhenxe ii-ofisi. Sinike a ngokubanzi umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo ukuhlangabezana neemfuno zethu diverse umxhasi-base. Elicebo kusekwe ii-ofisi zethu kwi qhosha corporate kwaye mali centers yehlabathi sele yenziwe kwethu. Ukususela yayo founding ngowe, Nishimura＆Asahi sele grown ukuba abe omnye Japan ke, oyena umthetho firms kwaye omnye ambalwa kakhulu Isijapanese ngokupheleleyo-nkonzo firms. Kunye ezijolise yonke imiba domestic ngamazwe corporate umsebenzi, thina lokucebisa hayi kuphela phezulu-tier Isijapanese kwaye langaphandle iinkampani kunye. Mitsui Umthetho Ifemi abaqondisi-mthetho kuba kofakwano isebenziseke amava kwi-domestic kwaye overseas ngasinye intsimi ka-corporate isemthethweni imicimbi, uboniso ndlela kwi-mali ngokusemthethweni imicimbi Esekelwe kwi — Osaka, Ejapan waza waseka ngowe, bethu ifemi sele waqhubeka ukubonelela zethu abaxhasi kunye umgangatho isemthethweni iinkonzo kwi-i-iyanelisa kwaye iindleko esebenzayo nefanelekileyo. Sino otyebileyo amava kwi-uphatho a libanzi ngezixhobo ezahlukeneyo ngamazwe kunye nelindle Isijapanese imicimbi enxulumene kwaye sijonge phambili ngokusebenzisa oko. TMI Associates yamiselwa ngowe- kunye kuqhutywe amane anesithoba amalungu. Ukususela zethu foundation, bethu umsebenzi wenziwe ukuba ‘Ukwamkela Entsha Imingeni’ kwaye ‘Ekusebenzeleni Abaxhasi’ Ifuna, apho ngoku bahlala efanayo, nangona eziquqa ukukhula zethu ifemi
Corporate bankruptcy, Isijapanese indlela - Japan phinda-Phinda